Ukuzibophelela - Aiven On zokubhala Co., Ltd.
1. umgangatho ophezulu kunye neemveliso elide elihlangana kunye / okanye nje ungaphaya koko kulindelekileyo yanamhlanje yokusingqongileyo
2. uzibophelele Ngokupheleleyo Sales Team, Service Customer olukhawulezayo - ukuphendula kwisithuba seeyure ezingama-24.
3. iqela olomeleleyo kunye nobungcali ulawulo olusemgangathweni, Osenyangweni lweMigangatho Control ngexesha yonke imiba mveliso kunye nonikezelo lokugqibela.
4. Kwi-ixesha lokubeleka.
5. Usebenzisane yemiyinge ezininzi adumileyo kunye ngempumelelo ukwakha igama wethu olungileyo.
6. Enkulu kothi ukuba sikhonze nomgangatho elungileyo.
7. Umgaqo yembuyiselo okanye yokuzala nayiphi na ingxaki esemgangathweni.
8. Siye sibe ezizodwa 15 Umntu R & D iziko, ukuphuhlisa kunye nokunikezela nabathengi bethu amakhulu iimveliso ezintsha okanye ayile ngonyaka ngamnye, Okwa ti umsebenzi kwakhona kunye namaqabane iqela ukuyila eTshayina, eUnited States, Jamani, Japan njl ngenxa yaba ngaphezu ubuchule, kusenza sikwazi soloko bemi emdeni iintsingiselo zolu rhwebo lwehlabathi.
9. Ukuba umenzi likhulu omfisha Umatshini ehlabathini lula oluzenzekelayo ngokupheleleyo, Umatshini umboniso amandla yethu lwemveliso ingaphezulu kwe 1.1 billion iikhompyutha ngonyaka ngamnye kwaye 'izikhongozeli ngenyanga 70 * 20.
Factory Office Umatshini Umboniso , ukuvelisa Office Umatshini Umboniso , Umthengisi Office Umatshini Umboniso , Vendor Office Umatshini Umboniso , Office Umatshini Umboniso Producer , Ofisi Umatshini Umboniso yoMvelisi ,